Baiboly pejy 678 - Ny Baiboly
Voalohany < 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 Manaraka Farany
Filipiana toko 2 (tohiny)
7fa nialany izany tamin'izy naka ny fomban'ny mpanompo, ka tonga mitovy amin'ny olombelona, sy hita ho olombelona tamin'ny fisehoany rehetra, 8ary nilatsa-tenany ho ambany, nanolo-tena hanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. 9Ho valin'izany kosa, dia nasandratr'Andriamanitra ambony indrindra izy, sy nomeny anarana mihoatra ny anarana rehetra, 10mba handohalika amin'ny anaran'i Jesoa avokoa ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etý an-tany, na ny any ambany, 11ary mba hanaiky avokoa ny lela rehetra fa Jesoa-Kristy dia Tompo efa niditra amin'ny voninahitr'Andriamanitra Ray.
25Nihevitra anefa aho fa i Epafrodita rahalahiko, sady mpiara-miasa sy mpiara-miady amiko, ary irakareo hanompo ahy amin'ny zavatra ilaiko, dia tokony hampandehaniko hankaty aminareo aloha; 26fa efa manina anareo rehetra izy, sady nalahelo noho ny nandrenesanareo azy hoe narary. 27Narary saika maty tokoa izy, fa Andriamanitra namindra fo taminy; ary tsy taminy ihany fa tamiko koa, mba tsy hananako alahelo mitongoa alahelo. 28Koa dia ny nandefa azy no nahazoto ahy kokoa, mba hifalianareo amin'ny fahitana azy indray, sy hahamaivamaivana kokoa ny alaheloko. 29Raiso an-kafaliana ao amin'ny Tompo àry izy; ary hajao ny olona toy izany; 30fa ny raharahan'ny Kristy no saika nahafaty azy; ary ny fanefana ny fanompoana ahy tsy efanareo no nanaovany ny ainy tsy ho zavatra.
Filipiana toko 3
Fitandremana sao voafitaka - Ny tsy nitadiavany fahamarinana tamin'ny Lalàna - Ny fikezahana ho lavorary - Ny amin'izay fahavalon'ny hazo fijaliana.
1Farany, ry rahalahy, mifalia ao amin'ny Tompo. Tsy manahirana ahy ny mamerin-teny raha manoratra aminareo, sady mahasoa anareo izany. 2Mitandrema tena amin'ireo amboa, mitandrema tena amin'ireo mpiasa ratsy, mitandrema tena amin'ireo manan-taketra! 3Fa isika no tena voafora, dia isika izay manompo an'Andriamanitra amin'ny Fanahy, sy manao ny Kristy Jesoa ho reharehantsika, ary tsy mitoky amin'ny nofo. 4Mba manana izay hitokiako amin'ny nofo ihany anefa aho, ka raha ny olon-kafa aza manao azy ho afa-mitoky amin'ny nofo, mainka fa izaho; 5fa izaho dia isan'ny voafora tamin'ny andro fahavalo, taranak'Israely avy amin'ny fokon'i Benjamina, Hebrio, teraky ny Hebrio; farisiana aho, raha ny amin'ny Lalàna; 6mpanenjika ny Eglizy, raha ny amin'ny zotom-po; tsy nanan-tsiny, raha ny amin'ny fahamarinana ny amin'ny Lalàna. 7Ireny toa tombony ho ahy ireny anefa, dia nataoko ho faty antoka noho ny amin'ny Kristy.
8Eny, mbola ataoko ho faty antoka tokoa izany rehetra izany, raha oharina amin'ny fahambonian'ny fahalalana ny Kristy Jesoa Tompoko; fa ny fitiavako azy no namoizako ny zavatra rehetra, ary mba hahazoako ny Kristy, dia ataoko ho fako, fako foana ny zavatra rehetra, 9mba ho hita ao aminy aho, tsy amin'ny fahamarinan'ny tenako, na ilay avy amin'ny Lalàna, fa amin'ilay avy amin'ny finoana ny Kristy, dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra noho ny finoana; 10mba hahalala azy aho, dia izy sy ny herin'ny fitsanganany amin'ny maty, ary ny fiombonana amin'ny fijaliany, ka ho tonga toa azy amin'ny fahafatesany, 11sy hahatratra ny fitsanganana amin'ny maty, raha azoko atao.
12Tsy dia hoe efa nahatratra sahady aho tsy akory, na hoe efa lavorary; fa miezaka aho mba hahatratra izay nahatratraran'ny Kristy Jesoa ahy. 13Eny, ry rahalahy, tsy manao ahy ho efa nahatratra aho, fa zavatra iray ihany no ataoko, dia ny manadino izay eo aoriako, sy miezaka ho amin'izay eo alohako; 14mihazakazaka hahatratra ny marika aho, mba hahazoako ny loka izay iantsoan'Andriamanitra ahy eny ambony eny, ao amin'ny Kristy Jesoa. 15Aoka àry hiray amin'izany ny hevitsika rehetra efa lavorary; ary raha mbola misy zavatra sasany iheveranareo hafa noho izany, dia Andriamanitra no hanazava anareo ny amin'izany. 16Ny efa azontsika anefa dia aoka hizorantsika, toraka ny efa nataontsika hatramin'izao.
17Ry rahalahy, makà tahaka ahy hianareo; ary diniho ireo mandeha araka ny ohatra hitany taminay. 18Voalazako taminareo matetika, sady mbola lazaiko amin-dranomaso koa ankehitriny, fa maro no mandeha miseho ho fahavalon'ny hazo fijalian'i Jesoa-Kristy mihitsy. 19Fahaverezana no hiafaran'ireny, fa ny kibony no andriamaniny, ny tokony hampahamenatra azy no ireharehany, ny zavatry ny tany no hany ankamaminy. 20Fa isika kosa dia any an-danitra no fanjakantsika, ary avy any koa no iandrasantsika Mpamonjy, dia Jesoa-Kristy Tompo, 21izay hanova ity vatantsika tsinontsinona ity, ka hampitovy endrika azy amin'ny vatany be voninahitra, araka ny herin'ny fahefana nampanekeny azy ny zavatra rehetra.
Filipiana toko 4
Anatra samihafa - Teny fisaorana - Fanaovam-beloma.
1Koa amin'izany, ry rahalahy malalako, mamiko indrindra, fifaliako aman-tsatro-boninahitro, mahareta tsara ao amin'ny Tompo araka izany, ry malalako.
2Mangataka amin'i Evodia aho, ary mihanta amin'i Sintikea, mba hifanara-kevitra tsara ao amin'ny Tompo izy. 3Ary hianao kosa, ry ilay tena mpiara-miasa amiko, dia mangataka aminao aho mba hanampy azy roa vavy amin'izany koa, fa izy ireo no niara-niady tamiko teo amin'ny Evanjely, dia izy sy Clément mbamin'ireo mpiara-miasa amiko sisa, izay efa ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anarany.
4Mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo; eny, averiko indray: mifalia e! 5Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny hamoram-panahinareo: efa akaiky anie ny Tompo e!
Pejy: Voalohany < 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3737 seconds